Myanmar Bus Ticket BNF Express to Yangon Bagan Mandalay and Other | How To Buy?
www.bookmyanmarhotels.com - Find most valuable and recommended hotels
www.greenmyanmarcarrental.com - Find city car rental or Myanmar highway car rental with best driver and right price
www.myanmartrainticket.com - If you have problem buying train ticket in myanmar , don't forget us
www.myanmarflighticket.com - Get Myanmar Flight Ticket deals with best price
Myanmar Bus Ticket BNF Express to Yangon Bagan Mandalay and Other က ဘယ်လို လက်မှတ် ဝယ်ရမလဲ..?
ပထမဆုံး https://www.bnfexpress.com website ကို Computer မှတဆင့် / Mobile ဖုန်းမှတဆင့် ဝင်ပါ။
မိမိ သွားလိုတဲ့ ခရီး From, To, ခရီးသွားလိုသည့် နေ့ရက်၊ ခရီးသွားမည့် လူဦးရေကို ဖြည့်စွက်ပါ။ မိမိစိတ်ကြိုက် Express Bus ကားလိုင်းများကို ရွေးချယ်ပြီး “Yes, Book Now” ကို နှိပ်ပါ။ Guest (သို့) Register Member အနေဖြင့် Check Out လုပ်ပါ။
Express Bus ကား လက်မှတ် ငွေ ပေးချေမှုအား MPU (သို့) Bank Transfer (သို့) Deposite စသဖြင့် မိမိ နှစ်သက်ရာ Payment System ကို ရွေးချယ်ပါ။
လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြီးပါက Ticket Operator မှ သင့် Booking အား စီစစ် Reservation ပြုလုပ်ပြီး သင့် Mobile ဖုန်းသို့ SMS Ticket ပို့ပေးပါမည်။ ၄င်း SMS အား ကားဂိတ် တွင် ပြသပြီး လိုက်ပါ စီးနင်း နိုင်ပါသည်။